Iindlela ezi-8 eziSimahla eziSimahla kwiPowerPoint | Iindaba zeGajethi
Kule minyaka ingama-20 idlulileyo, sibone iifomathi ezimbini ezibe ngumgangatho kwi-Intanethi. Kwelinye icala sifumana iifayile kwifomathi yePDF, ifomathi ngoku ehambelana nayo ngokwendalo nazo zonke iinkqubo zokusebenza ngaphandle kokusebenzisa nasiphi na isicelo sangaphandle ukuyivula. Kwelinye icala, sifumana iintetho kwiifom ze-.pps kunye .pptx. Ezi zandiso zihambelana neefayile ze yenza imiboniso evela kwisicelo seMicrosoft PowerPoint.
Ukuze ukwazi ukufikelela kumboniso owenziwe ngale sicelo, kubalulekile ukuba ube nombukeli ohambelanayo, zonke ziyahambelana kodwa azifumaneki ngokwendalo. IMicrosoft PowerPoint sesona sicelo silungileyo sithengiswayo kwintengiso ngokwenza ulwandiso lwalo naluphi na uhlobo, kodwa sisicelo ekufuneka sisebenzise ukubhalisela iOfisi 365 ukuze ukwazi ukuyisebenzisa. Ukuba ujonga ezinye iinkqubo zokwenza imiboniso, siya kukubonisa ukuba zeziphi ezizezinye iindlela kwiPowerPoint.
Phakathi kwezinye iindlela ezikhoyo ezikhoyo kwintengiso, sinokufumana zombini iindlela zokuhlawula simahla kunye nokuhlawulwa, ngenxa yoko isenokungabi ngumbono ombi ukuhlawula umrhumo weOfisi 365 ukuba sizimisele ukufumana okungcono kulo ukuya kwi-PowerPoint, nokuba kungumsebenzi wethu wesiqhelo okanye ngexesha lethu lasimahla ukuze sikwazi ukuguqula iziphumo zibe yividiyo ukuze zikwazi ukuzipapasha kamva kwiqonga levidiyo elisetyenziswa kakhulu kwihlabathi: iYouTube. Izinketho kunye namathuba asinikwa yiPowerPoint phantse awanasiphelo, ngenxa yesizathu bekuyimakethi iminyaka emininzi njengelona qonga lilungileyo lokwenza imiboniso, njengeMicrosoft Word okanye i-Excel kumacandelo abo.
1 I-Keynote, i-Apple's PowerPoint
2 Izilayidi zikaGoogle, enye indlela kaGoogle
3 UPrezi, yenye yezona ndlela zintle kwi-Intanethi
4 I-Ludus, yenza imiboniso yoopopayi ngendlela elula
5 Canva, yintoni efunekayo ngokungqongqo
6 Swayipa, jika iintetho zibe ziincoko
7 Isilayidi, kwizinto zekhonkrithi
8 Zoho, iphefumlelwe yiPowerPoint
9 Eyona ndlela ilungileyo kwiPowerPoint?
I-Keynote, i-Apple's PowerPoint
Siqala olu luhlu nge enye indlela yasimahla yeApple yenza ukuba ifumaneke kubo bonke abasebenzisi zombini iqonga ledesktop, iMacOS, kunye neqonga lezixhobo eziphathwayo, i-iOS. Sele kuyiminyaka ngoku, uApple enikezela ngesicelo seKeynote kubo bonke abasebenzisi abane-ID yasimahla ye-Apple, ukongeza kwezinye izicelo eziyinxalenye yeWork, nokuba abanaso isiphelo sendlela esenziwe yiApple, ukusukela ICloud.com inokwenza zonke iinkonzo ezisinika zona, kubandakanya i-Keynote, amaphepha kunye neenombolo.
Ngelixa kuyinyani oko inani elikhulu lokukhetha lilahlekile Ukuze ukwazi ukwenza ngokwezifiso nenkcukacha ezincinci, okwangoku yenye yezona ndlela zisimahla nezihlawulelweyo ezikhoyo kwintengiso. Ukongeza, iApple ihlaziya rhoqo isicelo esongeza imisebenzi emitsha kunye nezixhobo ezisivumela ukuba siqhubeke nokwenza ulwaziso kunye nokongeza ukuhambelana okukhulu neefayile kunye neefomathi.
Izilayidi zikaGoogle, enye indlela kaGoogle
Olunye uhlengahlengiso olukhululekileyo lufumaneka kwiofisi ekwi-intanethi ebonelelwa yiGoogle ebizwa ngokuba yiZilayidi. Izilayidi yi Isicelo esisekwe kwilifu Ngale ndlela sinokwenza ngayo imiboniso yethu, ezinye iinkcazo ezisisiseko ngaphandle kweefriji ezininzi, kuba inengxaki kukungabikho kokhetho oluninzi. Ukuba kufuneka senze intetho kunye, le nkonzo yenye yezona zinto zilungileyo esinokuzifumana kwimarike, kuba ikwasinika ingxoxo ukuze wonke umntu oyinxalenye yeprojekthi akwazi ukusebenzisana kwaye athethe ngexesha lokwenyani.
Ukuba idityaniswe ngaphakathi kwendalo kaGoogle, sinokufikelela ngqo kwiifoto esizigcine kwiiFoto zikaGoogle ukuze sikwazi ukuzibandakanya ngokuthe ngqo kwintetho ngaphandle kokuzilayisha ngalo naliphi na ixesha kwilifu likaGoogle ukuzibandakanya. Zonke iintetho zigcinwa kwiakhawunti yethu kaGoogle Drayivu, enikezela kuthi, kunye neGmail kunye neefoto zikaGoogle, ukuya kuthi ga kwi-15 GB yokugcina ngokukhululekileyo. Izilayidi zikaGoogle zingaphakathi kuGoogle Drayivu kwaye yenze iprizenteyishini ngeGoogle iZilayidi, kufuneka nje ucofe ku-New ukukhetha ukuba loluphi uhlobo lwefayile esifuna ukuyenza.
UPrezi, yenye yezona ndlela zintle kwi-Intanethi
Njengoko intetho yePowerPoint iqale ukubamba, Prezi yaqala ukuba, ngokuzimelela kwayo, yaba yenye yeefayile ze- ezizezinye iindlela ezilungileyo ezikhoyo kwimarike, kude kube namhla kusenjalo. Ndiyabulela ku-Prezi singenza iintetho ezinamandla ngokusebenzisa imixholo eyahlukeneyo enikezelwa liqonga, imixholo esinokongeza kuyo inani lezinto ezongezelelweyo esizifunayo.
Enkosi kutshintsho olunamandla, endaweni yokujonga ngathi sijonge kwisilayidi, iya kusinika imvakalelo yokuba sibukele ividiyo encinci apho esona sifundo sinesithukuthezi sinokuba semtsalane. Ukuba ucwangcisa ukusebenzisa le nkonzo manqaphanqapha, U-Prezi ukhululekile ngokupheleleyo ukuba awunangxaki ngokubonisa ukuba iyafumaneka kuye wonke umntu. Ukuba, kwelinye icala, awufuni ukwabelana ngendalo yakho, kuya kufuneka uphume uze ufumane enye yezicwangciso zenyanga ezahlukileyo ezisinikwa leli qonga.
I-Ludus, yenza imiboniso yoopopayi ngendlela elula
ULudus, Njengo-Prezi, yenye yeenkonzo zewebhu kule minyaka idlulileyo ithathe indawo enkulu yabasebenzisi abafuna ukwenza naluphi na uhlobo lwenkcazo. Ukuba sifuna yenza imiboniso ebonakala njengevidiyo kunentetho ILudus lolona khetho lufanelekileyo. Kwividiyo engentla ungabona zonke iinketho asinika zona kunye nayo yonke into esinokuyenza ngale nkonzo imnandi.
Enye yeenzuzo eziphambili ezisinika zona xa kuthelekiswa nezinye iinkonzo ezinje ngePezi, ngu ukudityaniswa kweYouTube, Giphy, SoundCloud, Google Maps, Facebook, Instagram ... esivumela ukuba songeze ngokukhawuleza nawuphi na umxholo osuka kula maqonga ngokukhawuleza nangokulula. Enkosi ngokudityaniswa kunye nokudityaniswa kweefayile kwifomathi ye-GIF, sinokwenza imiboniso bhanyabhanya encinci endaweni yokubonisa.
Inguqulelo yasimahla yeLudus iyasivumela Yenza ukuya kuthi ga kwimiboniso engama-20, ukugcina ukuya kuthi ga kwi-2GB kunye nokubanakho kokukwazi ukuthumela ngaphandle izilayidi kwifomathi yePDF. Kodwa ukuba sifuna enye into, kuyakufuneka siye ekuphumeni kwaye sikhethe isicwangciso sePro, isicwangciso esivumela ukuba senze inani elingenamda leentetho, iintetho esinokuzigcina kwi-10 GB yendawo esisinika yona , Ithuba lokukhuphela inkcazo-ntetho ngoku ngaphandle konxibelelwano lwe-Intanethi ukongeza ekusivumeleni ukuba sikhusele intetho kunye negama eligqithisiweyo.
Canva, yintoni efunekayo ngokungqongqo
Ukuba into esiyifunayo ngu Elula, akukho-frills enye kwi-PowerPoint, kwaye bobabini u-Prezi noLudus bakhulu kakhulu kuthi, Canva Isenokuba lolunye uhlobo olufunayo. I-Canva isinika inani elikhulu lemifanekiso ukongeza kwimiboniso simahla, kuthintela ukuba kufuneka siqhubeke sikhangela iGoogle kwimifanekiso ukwenza iintetho zethu. Umsebenzi ulula kakhulu, kuba kufuneka sikhethe kuphela izinto esifuna ukuzongeza kwaye sizitsalele kwindawo esifuna ukuba babenazo kwinkcazo-ntetho.
Ikwasivumela sebenza ngokwamaqela, isinika ukufikelela kwiitemplate ezingaphezu kwe-8.000 kunye ne-1 GB yokugcina kwinguqulelo yasimahla. Ukuba sikhetha uguqulelo lwePro, olunexabiso elimalunga ne- $ 12,95 ngenyanga, siya kuba nokufikelela kwimifanekiso engaphezulu kwe-400.000 kunye neetemplate, sinokusebenzisa iifonti zesiko, ukuhlela iifoto kunye nemiboniso kwiifolda, uyilo lokuthumela ngaphandle njengee-GIFs ukongeza ukubanakho ukuphinda uyisebenzise kwakhona kwezinye iintetho ...
Swayipa, jika iintetho zibe ziincoko
Ngamanye amaxesha sinyanzeliswa ukuba senze iingcaciso akufuneki ubonise ulwazi olubonakalayo, kodwa imalunga nokunikezela ngolwazi ngokunikezela ngeendlela ezahlukeneyo, kwaye kuxhomekeke ekubeni sikhetha luphi na ulwazi okanye enye iya kuvela. Kule meko, Swayipha Enye yezona zinto zikhethileyo kwimarike. Ngaphaya koko, njengoko yenzelwe le njongo, sinokongeza izicatshulwa zobude obahlukeneyo ngenxa yokuhambelana kweMarkdown.
Inguqulelo yasimahla iyasivumela sebenzisana nenani elingenamkhawulo leentetho, yenza imiboniso yabucala kwaye uthumele iziphumo kwifomathi yePDF. Ukuba sifuna ukongeza amanani, ukhuselo lwegama eligqithisiweyo, ukulandelela ikhonkco, inkxaso kunye nokunye okuninzi, kufuneka siphume kwi-euro ezingama-15 ngenyanga.
Isilayidi, kwizinto zekhonkrithi
Ukuba siqhele ukunyanzelwa yenza uhlobo oluthile lwenkcazonokuba kukubonisa imveliso, xela iziphumo zekota, malunga neprojekthi, okanye nayiphi na enye imeko efuna uthotho lweetemplate ezimiselweyo, Slidebean Yeyona ndlela ilungileyo kwintengiso. Ngokusebenzisa iiSlidebean kufuneka sikhethe uhlobo lweetemplate esizijongayo kwaye siyitshintshe eyethu idatha. Elula njengaleyo.
Izilayidi azenzelwanga ukuba ziguqule ujongano, okanye ukongeza okanye ukususa umxholo, kodwa kwi ukuqhuba kangangoko kunokwenzeka ekudalweni komsebenzisi, ukuze ujolise kuphela kwinto ebalulekileyo kwaye kwimizuzu engaphantsi kwesi-5 unokwazi ukuyilungiselela intetho. Ngokungafaniyo nezinye iinkonzo, iiSlidebean azisiniki sicwangciso simahla sokuvavanya ukuba isicelo sisebenza njani, kodwa ngaphandle kwesicwangciso esisikhethileyo, sinexesha lokulingwa ukuze sijonge ukuba siyazifanela na iimfuno zethu.
Zoho, iphefumlelwe yiPowerPoint
Ukuba unayo isetyenziselwa iPowerPoint kwaye ungaziva ngathi uqala ukufunda ukuba zisebenza njani ezinye iinkonzo ezikwi-intanethi okanye usetyenziso ukwenza imiboniso, Umboniso weZoho Yeyona nto ikufutshane kwi-PowerPoint esiza kuyifumana, kuba ujongano lwayo kunye nenani lezinto onokukhetha kuzo, ubuncinci ezisisiseko, ziyafana kakhulu nezo sinokuzifumana kwisicelo seMicrosoft. Ukongeza imifanekiso, iibhokisi zombhalo, iintolo, imigca… yonke into kulula kakhulu ukuyila ngeZoho Show.
Ngokubhekisele kwinani leetemplate esinazo, ilinganiselwe kakhuluUkungathethi ukuba akukho, kodwa ukuba ukucinga kwakho yinto yakho kwaye awunangxaki yokujongana nesilayidi esingenanto, ekugqibeleni ungasifumana isicelo osifunayo ukwenza intetho yakho yesiqhelo.
Eyona ndlela ilungileyo kwiPowerPoint?
Singayibona njani nganye yeenkonzo zewebhu / usetyenziso esikubonise kulo kweli nqaku zijolise kwiinjongo ezahlukeneyo, ke ukuba into yethu kukwenza umboniso omangalisayo, olona khetho lulungileyo yiLudus, ngelixa sifuna ukwenza imiboniso sisebenzisa itemplate, iSlidebean ilungile. Konke kuxhomekeke kwiimfuno zethu, ke kuya kufuneka ucace malunga nayo ngaphambi kokuqesha inkonzo kwaye uqalise ukuqhelana nayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Olona khetho lubalaseleyo kwiPowerPoint
I-Google Drayivu iqala ityala elitsha